The History of Text Ozi | Martech Zone
Friday, December 2, 2011 Sunday, October 4, 2015 Adam Obere
O ruola afọ iri na itoolu kemgbe ahụ ozi ederede mbu e zigara? E zigara Richard Jarvis na Neil Papworth na December 03, 1992, bụ onye zitere ozi ederede na kọmputa site na iji kọmputa nke aka ya. Ederede ederede ahụ ezi ekeresimesi. N'okpuru ebe a bụ usoro iheomume nke Tatango kere iji nyere ndị na-agụ gị aka ịghọta etu esi ederede ederede kemgbe afọ 19 gara aga. Izi ozi ederede naanị ugbu a bụ ụlọ ọrụ ijeri $ 565 na, ewezuga olu, ụzọ kachasị esi esi ekwurịta okwu site na ngwaọrụ mkpanaka na mba ụwa.
Isi mmalite: Tatango SMS Marketing
Tags: SMSozi ederede
Dec 2, 2011 na 2:54 PM
nke a dị ezigbo mma!
Dec 3, 2011 na 12:44 PM
Great infographic, ọ bụ n'ezie n'ezie na-akpali ịhụ
ka ozi ederede siri malite ma bido na afọ, daalụ.
Dec 5, 2011 na 5:10 PM
Enweghị m ike ikwenye na anyị na-ede ozi ederede naanị ihe na-erughị afọ 10 mana anyị amaghị otu anyị si ebi na enweghị ya! HA
Andrea Vadas, Onye nwe ụlọ
Chọọ Indianapolis MLS n'efu!